मध्यरातमा विदेशमा भएका श्रीमानसँग ‘भिडियो कल’ गर्दागर्दै २४ बर्षीय महिलाले यस्तो निर्णय गरेपछि… – Jaljala Online
Posted on August 19, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
भदौ २, काठमाडौं । यो खबर सुजन पन्तल रातोपाटी अनलाइनमा लेखेका छन । रुकुम घर भई हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ घर भएकी २४ वर्षीया अमृता बोहरा कुँवरले असार २० गते झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । अमृताले झ्यालको ग्रिलमा कपडाको पासो लगाई झुण्डिएर आत्महत्या गरेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
रातोपाटी अनलाइनबाट साभार
र’वि लामि’छानेले हिरासतबाटै गरे यस्तो गम्भीर गुनासो, अब के होला ?
Posted on August 21, 2019 Author Jaljala Online
भदौ ४, काठमाडौँ । सञ्चारकर्मी शालि’कराम पुडा’सैनी आत्म’हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका न्यूज ट्वेन्टी फोरका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले आफू प्रहरी हिरासतभित्रै असुरक्षित रहेको गुनासो पोखेका छन्। श्रीमती निकिता पौडेलको फेसबुकमार्फत बुधबार साँझ लामिछानेले प्रहरीले आफूलाई पाँच वर्ष नै थुन्ने नियत देखाएको आरोप पनि लगाएका छन्। हिरासतबाटै रवीले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीप्रति केही प्रश्न पनि उठाएका […]
कात्तिक २६, काठमाडौं : संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा बनाउन सोमबार निर्देशन दिएको छ। कस्तो हुन्छ त त्यो नक्सा ? यो खबर सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको छ (हेर्नुहोस् नक्सा)। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले […]
यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान कहाँ के हुन्छ ? पढ्नुहोस
Posted on November 16, 2019 November 16, 2019 Author Jaljala Online
कात्तिक ३०, काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावले आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिमी पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै भारतको राजस्थानमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले नेपालमा मौसम बदली भएको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताइन्। ‘आज देशका मध्य र पश्चिमी भूभागमा आंशिमदेखि सामान्य बदली […]